क्षेत्रिय सभापति भएर समाजसेवा सँगै नेपाली काँग्रेस पाटीलाई अघि बढाउँन चाहान्छु : देवराज तामाङ
नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ बाट क्षेत्रिय सभापतिका उमेद्ववार देवराज तामाङसँग मणिराम दाहालले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
यहाँको राजनीतिक तथा सामाजिक परिचय पाऊँ न ?
म विगतकाे समयमा साजीलाल मा.वि.मा पढ्थेँ । त्यसबेला म ९ / १० क्लासमा पढ्थेँ । त्यतिबेला देखि नै राजनीतिमा संलग्न भएको हुँ । विद्यार्थी काल पछि म राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएको छु । म सामाजिक काममा पनि लागिरहेको छु । म वि.सं. २०५६ढ/ ०५७ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय रुपमा कार्यरत छु ।
सामाजिक कामहरु भन्नाले के कस्ता कामहरु गर्नु भएको छ । समग्रमा जानकारी पाउँन ?
यो सुन्दरहरैंचामा मैले सामाजिक काम अन्तर्गत कुनै पनि मठमन्दिर तथा सामाजिक काममा सहयोग नगरेको ठाउँ छैन होला । बाँसबारी–याङसिला–डाँगीे सडकखण्ड त्यहाँको वडा, नगरपालिकालाई खबर गर्दा चासो नराखेको अवस्था थियो । साथीभाईले अनुरोध गर्नुभयो, दसैँको बेला थियो, त्यसबेला मेरै सहयोगमा सडक मर्मत भएको हाे । अहिले हालसाल पनि वडा नं. ५ मा जुन स्वास्थ्य चौकी छ, त्यसमा पनि मेरौ निजी लगानीमा त्यहाँ पेबल बिछ्याउने काम भएको छ ।
यहाँ नेपाली कांग्रेस मोेरङ क्षेत्र नं. ६ को क्षेत्रीय सभापति पदमा उम्मेदवार हुनु भएको छ । यहाँको उम्मेदवारी चाहिँ के को लागि हो ?
नेपाली कांग्रेस अहिले गुटबन्दीमा धेरै रुमल्लिएको छ। अल्झिएको छ । कमसेकम यो चौधौँँ महाधिवेशनको संघारमा पार्टीको गुटबन्दी अन्त गर्न सकिन्छ कि। साथीभाइहरुलाई नेपाली कांग्रेसबाट पाउने सेवा सुविधा सम्पूर्ण साथीहरुलाई मिलाएर लान सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यका साथ मैले आफ्नो उम्मेदवारी दाबी गरेको छु ।
यहाँलाई क्षेत्र नं. ६ को सभापतिमा विजयी गराउनुे पर्ने खास कारण चाहिँ के छ ?
पहिले पनि म सुन्दरहरैंचा , केराबारी, याङसिला तथा पाटीगाउँ गरी क्षेत्र नं. ८को सभापति भएर काम गरिसकेको छु । त्यतिबेला मोरङ जिल्लामा ९ ओटा क्षेत्र थियो । पछि ६ नं. क्षेत्रको सभापति हुँदा पनि पूरा कार्यकाल काम गर्न पाइँन । अब समस्या समाधान भइसकेको छ । अहिले मोरङमा ६ ओटा मात्र क्षेत्र छ । मोरङ क्षेत्र नं. ६ मा मैले पार्टीमा धेरै सहयोग गरेको छु । फेरि क्षेत्र नं. ६ को सभापतिमा साथीहरुले मलाई जिताउनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ । उहाँहरुले साथ दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । साथीभाइहरुलाई मिलाएर लाने कोसिस गरेको छु ।
अहिले नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय महाधिवेशनको गतिविधि के कस्तो छ ?
= वडा स्तर र पालिका स्तरको महाधिवेशन सकिएको छ । अब प्रदेश स्तरीय छ । क्षेत्रीय सभापतिको उम्मेदवारको हैसियतले मेरो धेरै जिम्मेवारी छ । पार्टीमा गुटको राजनीति छ । जसरी भए पनि मैले मेरा साथीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने छ । आफूले पनि जित्नु पर्ने छ । त्यसैका लागि साथीहरुसँग भेटघाट र चुनावी अन्तरक्रिया चलिरहेको छ ।
यहाँ क्षेत्रीय सभापति हुनु भयो भने चाहिँ के गर्नु हुन्छ त ?
मैेले अघि नै उल्लेख गरिसकेको छु । क्षेत्रको एउटा सभापति भइसके पछि मेरो दायित्व साथीहरुलाई मिलाएर लानु पर्ने हुन्छ। भातृ संघ संस्थाहरुलाई परिचालन गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले नेपाली कांग्रेसले भातृ संगठनहरुलाई परिचालन गर्न सकेको छैन । पार्टी कमजोर भएको अवस्था छ । अब क्षेत्रीय सभापति भइसके पछि फेरि पार्टीलाई पुनर्जीवित गराएर, भातृ संगठनहरुलाई परिचालन गराएर, पार्टीलाई संगठनात्मक संरचनामा पुयाउनु पर्ने जिम्मेवारी छ । दुईवटा क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभाको चुनाव नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले हारेका छौँ । ती ठाउँमा जिताउने मेरो दायित्व रहने छ ।
पार्टी कमजोर भएको भन्नुभयो, पार्टी कमजोर हुनुको कारण के हो ? यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?
समयमा महाधिवेसन भएको छैन । न त हिजो भातृ संगठनको अधिवेशन गर्न सकिएको छ, टिका लगाएको भर भातृ संगठन कसरी हुन्छ ? ती सिस्टमलाई हटाएर अधिवेशन मार्फत एकढिक्का र बलियो पारेर लानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
यहाँको विचारमा राजनीति के हो र कस्तो हुनुपदर्छ ?
मान्छेले राजनीतिलाई एउटा व्यवसाय बनाइसके । राजनीतिलाई शुद्ध बनाउन सामाजिक कार्यमा होमिनु पर्दछ । मैले अघि पनि भनेँ, मैले व्यक्तिगत खर्चमा पनि धेरै सामाजिक कामहरु गरेको छु । हरेक ठाउँबाट चन्दा सहयोग आदि माग्न आउँदा मैले कहिल्यै खालीहात पठाएको छुइन । राजनीतिलाई सामाजिक कर्मका रुपमा लिनुपर्छ र राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउनु हुन्न भन्ने मैले बुझेको छु ।
यहाँले राजनीति गर्दा गर्दै सामाजिक काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच कसरी आयो, प्रेरणा कसरी प्राप्त भयो ?
हामी राजनीतिकर्मी भएपछि समाजमा भिजिएन भने, राजनीतिकर्मीको अर्थ रहँदैन । राजनीतिक पार्टीको दायित्व रहन्न । हामीले एउटा ठुलो दायित्व र जिम्मेवारी लिइसकेका छौँ । समाज परिवर्तनको जिम्मेवारी लिइसके पछि हामीले सामाजिक काम नगरेर अरु के गर्ने ?
यहाँ युवा हुनुहुन्छ । राजनीतिमा अवसर र ठाउँ पाइएन भन्ने युवावर्गको गुनासोलाई के भन्नु हुन्छ ?
आगामी अधिवेसनका लागि हामीले युवा नेतृत्वलाई जन्माइरहेका छौँ । मेरो क्षेत्र नं. ६ मा जहाँ म निर्वाचन लड्दैछु त्यसमा पनि हामी ४० प्रतिशत युवा नेतृत्व ल्याउँछाै । क्षेत्रीय नेतृत्वबाटै हामीले युवा नेतृत्व समावेश गरेर ल्याइसकेका छाै । हामीले अब युवा नेतृत्वलाई अघि बढाउनु पर्ने छ ।
यहाँको आगामी योजनाका बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
= यो ठुलो महाधिवेशन सकेपछि जुन एउटा ठुलो जिम्मेवारी मेरो काँधमा हुन्छ, यो क्षेत्र नं. ६ को पार्टीलाई कसरी लाने भन्ने कुरा छ। मैले पार्टीबाट पाउने सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरु भोलि वडाअध्यक्ष, वडा सदस्यहरु होला, एउटा सामाजिक कार्य गर्ने होला, ती सबै साथीहरुलाई मिलाएर, कुनै गुटबन्दी हुन नदिएर एकढिक्का बनाउरु लग्ने मेरो सोच छ, त्यही अनुसार म अगाडि बढ्छु ।
पार्टीमा गुटबन्दी हुने, एउटा समूहले अर्को समूहलाई खुट्टा तान्ने, नचिन्ने हुन्छ, किन यस्तो भएको ?
नेपाली कांग्रेस एउटा पार्टी हो । पार्टीभित्र आफ्नो विचार हुन्छ । विचार राख्न पाइन्छ । विचार मिल्नेको एउटा समूह हुन्छ । पार्टीमा दुईओटा वा तीनओटा समूह हुनु स्वाभाविक पनि हो । हिजो विश्वेश्वरजीले पार्टी जन्माउँदा त्यहाँ पनि समूहहरु थिए नि त । गणेशमान समूहहरु थिए, समूह हुन्छ, विचार राख्न पाइन्छ तर पार्टी एकढिक्का भएर जानुपर्छ । सधैँभरि गुटबन्दी नै गरियो भने पार्टी कमजोर हुन्छ । विचार फरक भए पनि पार्टी एकढिक्का हुनु पर्छ ।
अधिवेसनमा आफू सफल हुन्छु जस्तो लाग्छ ?
निश्चित रुपमा सफल हुन्छु किनभने मैले कार्यकर्ता र साथीभाइहरुको मन जितेको छु । म क्षेत्र नं. ८ को सभापति भएर पार्टीमा काम गरिसकेको छु । त्यसपछि पार्टीको समस्या समाधान भइसके पछि क्षेत्र नं. ६ क को पनि जिम्मेवारी लिइसकेको छु । मलाई राम्रोसँग अनुभव छ । यही अनुभवका आधारमा मेरा साथीभाइहरुले मलाई विश्वास गरेर जिताउनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
हस् त महत्वपूर्ण समय दिनुभयो । यहाँलाई धन्यवाद छ ।
हस् धन्यवाद ।
प्रस्तुति : मणिराम दाहाल